Arlette Ramaroson –Mpahay lalàna « Tsy tokony hampiasaina intsony ilay anarana IRD »
Anisan’ny resabe mbola mitana ny sain’ny maro eto amin’ny tany sy ny firenena ny fampiasan’ireo mpanara-dia ny filoha ankehitriny ilay anarana hoe : “Isika rehetra miaraka amin’ny filoha Andry Rajoelina”.
Nambaran’i Arlette Ramaroson izay mpahay lalàna iraisam-pirenena no sady efa kandida filoham-pirenena tamin’ny fifidianana farany teo fa tena voararan’ny lalàna tanteraka ny fampiasana io anarana io. Mazava be mantsy, hoy izy ny tian’izany anarana ambara izay toy ny efa miantso ny vahoaka hifidy ireo kandida natolony sahady. Ny nahavariana anefa, hoy hatrany Arlette Ramaroson dia neken’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fampiasana izany, ity andrim-panjakana iray ity izay nomarihiny tsara fa efa ela no tsy nankasitrahany sy tsy nekeny ny fomba fiasany. Na izany aza anefa hoy izy dia samy manana ny fomba fijeriny zavatra sy ny fahaizany ny mpitsara tsirairay avy. Mikasika ny fifidianana solombavambahoaka manokana moa dia fantatra fa kandida roa ihany no tohanany eto Antananarivo dia ny any Ambohidratrimo sy Atsimondrano raha maromaro kosa ny any amin’ny Faritra SAVA. Hampiavaka ireo kandida tohanany ireo raha ny fanazavany ny fandavana ny fandraisana fiara 4x4 ka ny vola tokony hividianana izany dia hatolotra manontolo ho an’ny minisiteran’ny mponina sy ny minisitera miahy ny tanora. Diso mahantra loatra mantsy ny Malagasy hoy izy ka tokony hamindrana fo.